Qaphela: Lezi zivivinyo zokugcina zingakhethwa ngokuzithandela. Akudingeki ukuthi uzenze. khona kuhlanganisiwe lapha ukuthi ukwenze ukuze ukukusiza uthole ukuqonda okwengeziwe nokwazi ukusebenzisa izinto ezifundwayo.
Ukusingatha Ukudideka Emsebenzini
1.‎1 FUNDA: Ukusingatha Ukudideka Emsebenzini
Ukufinyelela futhi Uhoxise
2.‎1 FUNDA: Ukufinyelela futhi Uhoxise
Ukusingatha Ukukhathala Emhlabeni Womsebenzi
3.‎1 FUNDA: Ukusingatha Ukukhathala Emhlabeni Womsebenzi
3.‎2 FUNDA: I-Extroversion kanye ne-Introversion
3.‎3 FUNDA: Thatha Uhambo
3.‎4 Hlola Ukuqonda Kwakho
Ungawusingatha Kanjani Umsebenzi
4.‎1 FUNDA: Ungawusingatha Kanjani Umsebenzi
5.‎1 FUNDA: Ukubaluleka Komsebenzi
6.‎1 IMfundiso ye-Stable Datum
6.‎2 Ukusingatha Ingxabano
6.‎3 Ukusingatha Ukukhathala Emhlabeni Womsebenzi
6.‎4 Thatha Uhambo
true tools /zu-ZA/tools-for-life/tools/steps/handling-confusion-in-the-workplace.html read 5 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tools_zu_ZA.jpg AmaThuluzi AseMsebenzini
5.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Umsebenzi yi-stable datum yalo mphakathi. Ngaphandle kokuthile okungenziwa, akukho umuntu angakuphilela. Umuntu ongakwazi ukusebenza muhle njengofile futhi uvamise ukukhetha ukufa.
kwi-Scientolgy, izimfihlakalo zempilo aziseyona imfihlakalo kakhulu. Akumele kube khona imfihlakalo mayelana nokuphila. Kuphela abantu abangenzi noma abangacabangi kahle bafuna kube nezimfihlo eziningi abafihlelwe zona. I-Scientology isuse izinto empilweni okwakunzima ukuziqonda kanti ithole nezisombululo ezinkingeni zempilo. I-Scientology, okokuqala ngqa emlandweni woMuntu, ingakhulisa ubuhlakani, ikhulise umdlandla futhi ibuyise amandla okudlala umdlalo wokuphila. Ngisho umsebenzi uqobo ungaba, futhi, into emnandi engenza uzizwe ujabule.
Kunento eyodwa efundwe Kwi-Scientology ebaluleke kakhulu ekutheni umuntu osebenzayo ucabanga futhi abheke kanjani izinto. Uzwa njalo, emphakathini wakhe, ukuthi usebenzela imali ekhokhwayo ngokushesha futhi ayikho into ayenzayo ebaluleke kakhulu. Ukuze ashintshe indlela abuka ngayo lokhu, kufanele azi izinto eziningana. Enye yalezi ukuthi bambalwa kanjani abasebenza kahle. Ezingeni labaphathi, kuyajabulisa ukubona ukuthi indoda ibaluleke kakhulu ekwazi ukuphatha nokulawula imisebenzi namamadoda ibalulekile ngempela kunoma iyiphi inkampani enkulu. Kunzima ukuthola izisebenzi ezinhle njengalesi. Enye into ebaluleke kakhulu ukuthi izwe namuhla selikholelwe ukukholelwa—ngamafilosofi engqondo (izinto zamanga ezishiwo abantu abaphatha izingqondo ezifana nodokotela wezengqondo nezengqondo)—ukuthi uma usufile, sekuphelile, okwenzile futhi awunasibopho sokunye. Akunakwenzeka ukuthi lokhu kuyiqiniso.
Okunye esikwaziyo ukuthi abantu babalulekile futhi izinto ngeke zenziwe ngaphandle komsebenzi wabo. Kuke kwashiwo ngabanye ukuthi “Uma abantu becabanga ukuthi babaluleke kakhulu kumele behle baye emathuneni bayobheka—lawo madoda nawo ayebalulekile futhi ayedingeka.” Lokhu kuyinto ewubuwula impela ukuyisho. Uma ubheka ngokucophelela emathuneni, uzothola umuntu owayesebenza umshini owenza izinto eminyakeni edlule, futhi ngaphandle kwakhe, bebengeke babe nezimboni noma izitolo zomshini namuhla. Kuyangabazeka ukuthi lokho okwenziwe yileyo ndoda futhi wakunika umphakathi lapho esaphila yinto eyenziwa omunye umuntu namuhla.
Umuntu osebenzayo akayena nje umuntu osebenzayo. Isisebenzi akusona nje isisebenzi. Isisebenzi sehhovisi asisona nje isisebenzi sasehhovisi. Bayaphila, bayaphefumula, izinsika ezibalulekile (izinto ezibambe okuthile) okwakheke konke ukwakheka komhlaba wethu. Akuwona ama-cogs (amasondo) emshinini onamandla. Bawumshini uqobo.